WINDOWS 10 YAKHA IZINGUQUKO EZIJWAYELEKILE ZE-17713, UKUTHUTHUKA NOKULUNGISWA - I-WINDOWS 10
IMicrosoft namuhla ikhiphe okusha Windows 10 Yakha i-17713 kwabangenayo bama-Fast Ring abanezici eziningi ezintsha nokuthuthuka. I-17713 yangaphakathi yangaphakathi ifaka phakathi uhlu olukhulu lokuthuthuka kweMicrosoft Edge, Display (HDR), Fluent Design Notepad, Defender Application Guard, Biometric Login, Web Sign-in to Windows 10 nokuningi. Ungafunda ephelele Windows 10 Yakha imininingwane yesici engu-17713 kusuka lapha .
Okuqukethwe umbukiso 1 Ukulungiswa, ukuthuthuka, nezinkinga ezaziwayo ku Windows 10 Yakha i-17713 1.1 Yini Fixed Windows 10 Yakha 17713 1.2 Okusephukile Windows 10 Yakha i-17713 1.3 Izinkinga ezaziwayo ze-Narrator 1.4 Izinkinga Ezaziwayo zebha yegeyimu
Futhi lokhu Windows 10 Yakha i-17713 iqukethe ukulungiswa kwezinkinga ezibikwe ezindizeni zangaphambilini. Lapha siqoqe uhlu oluphelele lwalokho okulungisiwe futhi kusaphuliwe kwabakwa-Fast Ring Insiders (iRedstone 5).
Ukulungiswa, ukuthuthuka, nezinkinga ezaziwayo ku Windows 10 Yakha i-17713
Yini Fixed Windows 10 Yakha 17713
IMicrosoft ekugcineni ilungise izingqinamba ngomyalo weNarrator ongamemezelanga ivolumu iye phezulu naphansi, ishintsha isenzo lapho kwenziwa.
Abangaphakathi babike ngemizila emincane ye-pixel kumathunzi ashelelayo avela lapho i-UI ezivelelayo iye yafakwa khona ezindizeni ezedlule. Le nkinga manje isilungisiwe yiMicrosoft.
'Vumela izinhlelo zokusebenza ukufinyelela i-Filesystem yakho' kubonise ezinye izinhlamvu ezingajwayelekile esikhundleni sezikhala zombhalo. Le nkinga manje isilungisiwe.
Ikhasi lezilungiselelo zolimi lithole ukuthuthuka okudingeka kakhulu ekwakhiweni kwakamuva.
Izinkinga lapho imibiko ye-powercfg / yebhethri ingakhombisanga izinombolo kwezinye izilimi, ekugcineni ilungisiwe yi-Microsoft.
IMicrosoft ilungise udaba ngezinhlelo zokusebenza ezithile ezehlulekile ukubuyekeza ku-Microsoft Store lapho imiswe isikhashana yabuye yaqala kabusha.
Idizayini yezilungiselelo nokuningi ”/”… ”imenyu ilungisiwe ukuze umbhalo othi“ Iwindi elisha lePrivate ”ungasasikwe.
Izinkinga zokungenisa izintandokazi kubha yezintandokazi ku-Microsoft Edge manje sezilungisiwe.
Amazwana ane-markdown ku-github.com angabukwa kuqala manje aselungisiwe ekwakhiweni kwakamuva.
Amanye amasayithi akhombise i-tooltip encane engenalutho engenalutho ngaphezulu kwezinkambu zombhalo kusiphequluli se-Edge. Le nkinga manje isilungisiwe.
Ukuchofoza kwesokudla ku-PDF, lapho kuvulwa ku-Microsoft Edge, kuholele ekutheni i-PDF ishayeke. Lokhu manje kulungisiwe endizeni yakamuva.
Ukuphahlazeka okuphezulu kwe-DWM nakho kulungisiwe endizeni yakamuva.
Okusephukile Windows 10 Yakha i-17713
Onke amawindi angabonakala eshintshiwe “phezulu” nokufakwa kwegundane endaweni engafanele. I-workaround isebenzisa i-Ctrl + Alt + Del ukukhulisa isikrini somsebenzi bese ushaya ukukhansela.
Ukuphuma kwebha yomsebenzi kuzobe kungasenayo ingemuva le-acrylic ngemuva kokuthuthukela kulokhu kwakha.
Abanye abasebenzisi ngeke bakwazi ukunika amandla / ukukhubaza ukuxhaswa kwe-HDR Display ngoba iMicrosoft isebenza ekuthuthukiseni ukusethwa kwamavidiyo we-HDR, imidlalo nezinhlelo zokusebenza.
Ezinye izinhlelo zokusebenza ezisebenzisa amaphrofayili ombala we-ICC zizohlangabezana namaphutha we-Access Denied. Lokhu kufanele kulungiswe ekwakhiweni okuzayo.
Izinkinga ezinokuThuthukiswa kokuFinyelela zenza izilungiselelo zombhalo zibe zinkulu ngeke zenyuse usayizi wombhalo. Le nkinga izolungiswa ekwakhiweni okuzayo.
Isithonjana se-Delivery Optimization kuzilungiselelo siphuliwe kulokhu kwakha (uzobona ibhokisi).
Lapho i-Narrator Quickstart iqalisa, i-Scan Mode ingahle ingasebenzi ngokuthembekile. Sincoma ukuthi udlule ku-Quickstart ngemodi yokuskena evuliwe. Ukuqinisekisa ukuthi imodi yokuskena ivuliwe, cindezela i-Caps Lock + Space.
Ukusebenzisa abasebenzisi bemodi yokuskena bazothola izitobhi eziningi zolawulo olulodwa. Lokhu kuyasetshenzwa futhi kuzolungiswa ezindizeni ezilandelayo.
Izinkinga ezaziwayo ze-Narrator
Siyayazi inkinga ebangela ukuthi inkulumo yeNarrator iphele lapho ivuka kumodi yokulala. Sisebenza ngokulungisa.
Lapho usebenzisa imodi yokuskena ungahlangabezana nokuma okuningi kokulawula okukodwa. Isibonelo salokhu uma unesithombe esibuye sibe isixhumanisi. Lokhu yinto esisebenza kuyo.
Uma ukhiye weNarrator usethelwe ku-Insert nje futhi uzama ukuthumela umyalo weNarrator kusuka kusibonisi se-braille khona-ke le miyalo ngeke isebenze. Uma nje ukhiye we-Caps Lock uyingxenye yemephu yokhiye we-Narrator ukusebenza kwe-braille kuzosebenza njengoba kwaklanywa.
Kunodaba olwaziwayo ekufundweni kwebhokisi okuzenzakalelayo lapho isihloko sebhokisi sikhulunywa khona ngaphezu kokukodwa.
Izinkinga Ezaziwayo zebha yegeyimu
Ishadi eliphikisayo lozimele kwesinye isikhathi alibonisi kahle emidlalweni eyaziwayo.
Ishadi le-CPU likhombisa iphesenti elingalungile lokusetshenziswa ekhoneni eliphezulu kwesokunxele.
Amashadi kuphaneli yokusebenza awabuyekezi ngokushesha uma uchofoza kumathebhu.
I-gamerpic yomsebenzisi ayibonisi kahle, noma ngemuva kokungena ngemvume.
Njengoba kuhlala kunconywa, qiniseka ukuthi udlula kuhlu lwalokho okuphukile ngaphambi kokufaka okwakamuva Windows 10 yakha i-17713. Uzodinga ukuya kuzilungiselelo> Ukuvuselelwa Nokuvikeleka> Ukuvuselelwa kweWindows> Hlola isibuyekezo ukuze ulande okwakamuva Windows 10 build.
ungazicisha kanjani izibuyekezo ezizenzakalelayo windows 10 ekhaya
kungani i-google iyeke ukusebenza
windows ayikwazanga ukuxhuma kusevisi yokuvuselela
ingabe i-iTunes isebenza emafasiteleni 10
ukuthuthukiswa kwamawindi 10 kulenga kuma-99